Posted by သက်ဝေ at 2:10 PM7comments:
Posted by သက်ဝေ at 12:38 PM5comments:
Posted by သက်ဝေ at 1:05 PM6comments:
မနက်စောစော ရုံးခန်းအတွင်းသို့ လှမ်းအဝင်၊ ကျွန်မ၏ အလုပ်စားပွဲပေါ်တွင် ဖဲပြား နီညိုရောင်ဖြင့် လှပသေသပ်စွာ စည်းနှောင်ထားသော လေးထောင့်စပ်စပ် ဗူးကလေးတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ဗူးကလေး၏ အရွယ်မှာ တစ်ပေ ပတ်လည်ခန့်ရှိသည်။ ထိုဗူးကို ဖွင့်ကြည့်စရာ မလိုအပ်ပါ။ အထဲမှာ ရှိနေသော ပစ္စည်းကို ကျွန်မ အတပ်သိနေခဲ့သည်။ ထိုဗူးကလေးကို လက်ဖြင့် မထိချင်၊ မကိုင်ချင်သလို ဖြစ်နေပြီး တစ်ချိန်ထဲမှာ ကျွန်မ စိတ်အတွေးထဲ၊ ကျွန်မရင်ထဲသို့ ဝမ်းနည်းစိတ်တစ်ချို့နှင့်အတူ နောင်တများက တိုးဝှေ့ ဝင်ရောက် လာခဲ့တာဖြစ်သည်။ ထိုနောင်တတို့နှင့်အတူ နေရာတကာ အချိန်ဆွဲတတ်သော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်မိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ နာရီလက်တံများကတော့ သူ့အလုပ် သူလုပ်ရင်း တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် တရွေ့ရွေ့နှင့် ကုန်လွန်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
သည်အချိန်ဆိုလျှင် အနီးအနားက ဈေးဆိုင်တန်းလေးတွေမှာ၊ ရပ်ကွက်ထဲက စူပါမားကက် ခပ်သေးသေးတွေမှာ၊ နာမည်ကြီးလမ်းတွေပေါ်က စူပါမားကက် အကြီးကြီးတွေမှာ၊ နာမည်ကြီး ဟိုတယ်များနှင့် နာမည် သိပ်မကြီးသော ဟိုတယ်များမှာပါ အရောင်စုံ ပုံသဏ္ဌာန်စုံ၊ ထုတ်ပိုးပုံ ဒီဇိုင်း အစုံ အလင်နှင့် Moon Cake ဟု ခေါ်ကြသော လမုန့်များကို သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် ရောင်းချနေသည်ကို တွေ့ကြရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုလမုန့်များမှာ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်က မန္တလေး ဧလမုန့်များကဲ့သို့ ခပ်ပါးပါး ခပ်ပြားပြား မဟုတ်၊ လက်နှစ်လုံးသာသာ အထူရှိပြီး အထဲတွင် Red Bean သို့မဟုတ် Lotus Seed ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အနှစ်များကို ဌာပနာထားသော တရုတ်ရိုးရာ မုန့်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ထိုဌာပနာများထဲတွင် ဆားစိမ် ဘဲဥ အနှစ် တစ်လုံး (သို့မဟုတ်) နှစ်လုံး ထည့်ထားတတ်ကြသည်။ ထိုအနှစ် တစ်လုံး၊ နှစ်လုံး ပါဝင်မှုကိုလိုက်၍ ဈေးနှုန်းလည်း ကွာခြားလေသည်။ မုန့်၏ အပေါ်မျက်နှာပြင်တွင်မူ တရုတ်စာလုံးများ ရေးထိုး ပုံဖေါ်ထားသေးသည်။
Mid-Autum Festival ဟု သတ်မှတ်ကြသော ထိုလမုန့်ပွဲတော်သည် ကျွန်မတို့ဆီမှ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်နှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသည်ဟု ပြောရမလိုပင်။ ထိုအချိန်ကာလများတွင် လမုန့်များကို ဝယ်ယူကာ သက်ကြီးရွယ်အို မိဘ ဖိုးဖွားများ၊ ဆရာသမားများကို ဂါရဝပြုကြသည်။ လုပ်ငန်းသဘာဝအရ အချင်းချင်း ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ အဆက်အသွယ်ပြုနေကြရသော အလုပ်ဌာနများတွင်လည်း ရုံးတစ်ရုံးမှ တစ်ရုံး လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးပို့တတ်ကြသည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် ရုံးတိုင်းလိုလိုမှာ လမုန့်များ အလျှံအပယ်။ ထို့ကြောင့်လည်း သည်အချိန် သည်ကာလ သည်မနက် ကျွန်မစားပွဲပေါ်မှာ တွေ့လိုက်ရသော လေးထောင့်ဗူးလေးမှာ လမုန့်ဗူး ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်မ အတပ်သိနေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လမုန့်ဟု သိလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ကျွန်မ စိတ်မကောင်းစွာ နောင်တ ရနေခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မ နေအိမ်မှ ဆယ်မိနစ်ခန့် လျှောက်ရသော နေရာတွင် အမိုးနီနီမိုးထားသော ကားမှတ်တိုင်လေး တစ်ခုရှိပါသည်။ ဘတ်စ်ကား သုံးမျိုးသာ ရပ်လေ့ရှိသော ကားမှတ်တိုင်ငယ်လေးတစ်ခု ဖြစ်သော်လည်း လူနေထူထပ်သော ရပ်ကွက်ဖြစ်သောကြောင့် ထို မှတ်တိုင်လေးတွင် ကားစောင့်နေသူ တစ်ဦးမဟုတ် တစ်ဦး အမြဲရှိနေတတ်ပါသည်။ ကျွန်မ အလုပ်သွားချိန်မှာ နံနက် ခြောက်နာရီခွဲဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်တွင် ကျွန်မလိုပင် အလုပ်သွားမည့်သူများ၊ တွန်းလှည်းလေးများဖြင့် ဈေးဝယ်သွားမည့်သူများ၊ ကျောင်းဝတ်စုံကိုယ်စီဖြင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူကလေးများဖြင့် မှတ်တိုင်ကလေးသည် စည်ကားလျက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် ကျွန်မစီးရသော ကားနံပါတ်မှာ ၂၁၆ ဖြစ်ပါသည်။ မနက် ခြောက်နာရီခွဲတိတိတွင် ထိုဘတ်စ်ကားသည် မှတ်တိုင်ကလေးသို့ အချိန်မှန်မှန် ရောက်လာတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူ တစ်မိနစ် နှစ်မိနစ်ခန့် နောက်ကျတတ်၏။ အမှောင်ကောင်းကောင်း အပြယ်သေး၊ အလင်းရောင် မသဲကွဲသေးသော နံနက်ခြောက်နာရီခွဲတွင် ထိုကားမှတ်တိုင်လေးမှာ ကျွန်မနှင့်အတူ ဘတ်စ်ကားအမှတ် ၂၁၆ ကို စောင့်နေတတ်သောသူမှာ အသက် ခြောက်ဆယ်ခန့်ရှိမည်ဟု ယူဆရသော အသားဖြူဖြူ ပိန်ပိန်ပါးပါး အရပ်မနိမ့်မမြင့်နှင့် အဖိုးအိုလေးတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ် နံနက်တိုင်း အလုပ်သွားချိန်များမှာ ကားတစ်စီးထဲ အတူစီးကာ ခရီးသွားရသောကြောင့် သူ့၏ လှုပ်ရှားသွားလာပုံများနှင့် သူ့ဟန်ပန်ကို ကြည့်ကာ သူ့အသက်ကို ခြောက်ဆယ်ခန့်ဟု ကျွန်မ မှန်းဆသော်လည်း တခြားသူများသာဆိုလျှင် သူ့ခေါင်းပေါ်မှာ တစ်ခေါင်းလုံး ဖွေးဖွေးဖြူနေသော ဆံပင်ကျဲကျဲနှင့် အတန်ငယ် အိုမင်းရင့်ရော်နေသော နီကျင့်ကျင့် မျက်နှာကို ကြည့်ကာ သူ့အသက်ကို သည့်ထက်မက မှန်းဆ ကောက်ချက်ချမည်မှာ သေချာသလောက်ပင်။ ထိုသို့ မနက်တိုင်း အချိန်မှန် ကားစောင့်စီးကြရင်း တစ်လကျော် နှစ်လခန့် ကြာလာသောအခါ ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အတော်လေး မျက်မှန်းတန်းမိလာကြသည်။ အဖိုးအိုလေးသည် နေ့စဉ် ကျွန်မ မရောက်ခင် ကားမှတ်တိုင်သို့ အရင်ရောက်နေလေ့ရှိသည်။ တစ်ဦးကို တစ်ဦး မျက်မှန်းတန်းလာသော အခါတွင် ကားမှတ်တိုင်လေးကို ရောက်သွားတိုင်း အမှတ်မထင်သော်လည်းကောင်း၊ မှတ်မှတ်ထင်ထင်သော်လည်းကောင်း ထိုအဖိုးအိုလေးကို ကျွန်မ ရှာကြည့်တတ်လာသည်။ သူကလည်း ကျွန်မ ရောက်သွားချိန်များတွင် ကျွန်မ၏ ဒေါက်ဖိနပ်သံကြောင့်လားတော့ မသိ၊ ကျွန်မကို နောက်ခိုင်း ထိုင်နေရာမှ မသိမသာ စောင်းငဲ့ ကြည့်တတ်လေသည်။ သူ့အကြည့်များထဲတွင် ခရီးဖေါ်တစ်ယောက်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသော အရိပ်အရောင်များ ပါဝင်နေသည်ကို ကျွန်မ ခံစားမိပါသည်။
ကျွန်မ၏ အလုပ်မှာ တစ်ပတ်ကို ခြောက်ရက် ဆင်းရသော်လည်း ထိုအဖိုးလေးကတော့ တစ်ပတ်လျှင် ငါးရက်သာ သွားရလေသည်။ ထိုအခါ စနေနေ့ မနက်ပိုင်းများတွင် သူ့ကို မတွေ့ရတတ်ပါ။ အညိုရောင် သားရေအိတ်ငယ်ကလေး တစ်လုံးကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး နံနက်တိုင်း အချိန်မှန် တွေ့ရသောကြောင့် သူ အလုပ်သွားသည်ဟု ကျွန်မ ကောက်ချက်ချမိသော်လည်း တကယ် ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်ပါလိမ့်မည်။ အေးအေးဆေးဆေး သက်တောင့်သက်သာ လှုပ်ရှားသွားလာပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ချစ်စဖွယ် မြေးငယ်လေးများကို အချိန်မှန် သွားရောက် ထိန်းကျောင်းပေးနေသူ အဖိုးလေးတစ်ယောက်ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟု ကျွန်မ တွေးကြည့်မိပါသေးသည်။ ကျွန်မ အလုပ်ကို ရောက်ရန် ထိုဘတ်စ်ကားကို တစ်နာရီခွဲခန့် စီးရပါသည်။ သူကမူ ကျွန်မ ဆင်းလေ့ရှိသော မှတ်တိုင်ကို ကျော်လွန်ပြီး ဆက်စီးသွားတတ်ပါသည်။ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ဆက်စီးသွားရသည်ကို ကျွန်မ မသိပါ။
နေ့စဉ် နံနက် ခြောက်နာရီခွဲလုလုတွင် မှတ်တိုင်လေးသို့ ကျွန်မ ရောက်သွားတိုင်း သူသည် ခုံတန်းလေးမှာထိုင်လျက် ကားလာရာ လမ်းမဖက်သို့ မသိမသာ မျှော်ငေးနေတတ်သည်။ ဟိုး ခပ်ဝေးဝေးမှ ကားလာနေသည်ကို မြင်လျှင် သူက ဟိုမှာ ငါတို့ စီးရမဲ့ ကားလာနေပြီ ဟူသော သဘောဖြင့် ကျွန်မကို တစ်ချက် လှည့်ကြည့်မည်။ မှတ်တိုင်လေးရှေ့မှာ ကားရောက်လာလျှင် မရယ် မပြုံး မျက်နှာတည်တည်ဖြင့် အသာ မေးဆတ်ပြ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ခေါင်းညိတ်ပြကာ ကျွန်မကို အရင်ပေးတက်လိမ့်မည်။ ကျွန်မ တက်ပြီး အနောက်မှ သူက လိုက်တက်လေ့ရှိသည်။ နေ့စဉ် သူ ထိုင်လေ့ရှိသောနေရာမှာ ကားမောင်းသူ၏ နောက်တည့်တည့် တစ်ယောက်သာ ထိုင်နိုင်သော ခုံကလေးဖြစ်သည်။ ကျွန်မကမူ သူ့အနောက်တည့်တည့် ပြတင်းပေါက်နံဘေးတွင် ထိုင်လေ့ရှိပါသည်။
ကားစီးချိန် တစ်နာရီခွဲအတွင်းမှာ အနည်းငယ် ပျင်းရိစွာ လမ်းဘေးဝဲယာကို ငေးမောရင်း ကျွန်မ အတွေးများ ဟိုရောက် သည်ရောက်နှင့် ပျံ့လွင့်နေတတ်သည်။ လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိသောနေ့များတွင် ကားပေါ်မှာ ကျွန်မ စာဖတ်လေ့ရှိပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူ နားကြပ်ကို နားထဲထည့်ကာ ဖုန်းထဲမှ သီချင်းသံကို မျက်စိမှိတ် နားထောင်ရင်း ငိုက်မြည်းကာ လိုက်ပါသွားတတ်ပါသည်။
ထိုနေ့မနက်က ကျွန်မ ညဖက် ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ခဲ့သောကြောင့် မကြည်လင် မလန်းဆန်းပဲ အိပ်ချင်စိတ်ကသာ ကြီးစိုးနေပါသည်။ ကားပေါ်တွင် ကျွန်မ၊ ထို အဖိုးအိုလေးနှင့် နောက်ထပ် ခရီးသည် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်၊ ကားမောင်းသူပါ ထည့်ရေတွက်မှ စုစုပေါင်း လေးယောက်သာ။ ထိုအခါ ကားပေါ်မှ လေအေးပေးစက်ကလည်း လိုအပ်သည်ထက် ပို၍ အေးစိမ့်နေခဲ့ပါသည်။ ဝတ်လာသော အနွေးထည်ကို ကြယ်သီးအပြည့်တပ်ရင်း ခေါင်းကို နောက်ဖက်သို့ အသာမှီကာ မှိန်းနေလိုက်မိပါသည်။ တွေ့ကရာနေရာတွင် လွယ်လင့်တကူ အိပ်ပျော်လေ့ရှိသူ မဟုတ်သောကြောင့် ကျွန်မ ဆင်းရမည့် မှတ်တိုင်ကျော်သွားမှာ အနည်းငယ်မျှ မပူပင်တတ်ခဲ့ပါ။ သို့သော် ထိုမနက်က ကျွန်မ တကယ် အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါသည်။ ဆင်းရမည့်မှတ်တိုင်သို့ ရောက်သော်လည်း ကျွန်မ အိပ်ပျော်နေဆဲ။ ထုိုအခါ အဖိုးအိုလေးက ကျွန်မ ထိုင်နေသော ခုံတန်းလေးအထိ လျှောက်လာပြီး ခုံကို အသာ ပုတ်ကာ နှိုးခဲ့ပါသည်။ ကားမောင်းသူကလည်း ကျွန်မ နိုးအလာကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ပေးနေခဲ့ပါသည်။ ခုံကို ပုတ်လိုက်သော အသံကြောင့် ကျွန်မ နိုးလာပြီး ရှက်ရှက်နှင့် ကျေးဇူးတင်စကားကို ခပ်သွက်သွက်ပြောကာ ကားပေါ်မှ ဆင်းခဲ့ပါသည်။
ထိုနေ့မှအစပြုကာ ကျွန်မ ဆင်းရမည့် ကားမှတ်တိုင်သို့ ရောက်ခါနီးတိုင်း အဖိုးအိုလေးက ကျွန်မကို သမင်လည်ပြန် လှည့်ကြည့်တတ်လာတာဖြစ်သည်။ ကျွန်မ အိပ်ပျော်မနေပဲ ဆင်းရန် အသင့်အနေအထားကို မြင်လိုက်ရသောအခါတွင်မှ စိတ်ချသွားသော အမူအယာမျိုးဖြင့် တစ်ဖက်ကို ပြန်လှည့်သွားတတ်ပါသည်။ ရံဖန်ရံခါ ကျွန်မ မျက်စိကို အသာမှိတ်၍ မှိန်းနေတတ်သော်လည်း ဆင်းရမည့် မှတ်တိုင်မရောက်ခင်တွင် ကျွန်မကို သူ လှည့်ကြည့်နေလိမ့်မည် ဟု မသိစိတ်က သတိရနေကာ ရုတ်တရက်ဆိုသလို မျက်လုံး ပွင့်သွားတတ်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် မှတ်တိုင်ပါသည် ဟူသော သဘောဖြင့် နှိပ်ထားသော အချက်ပေးသံနှင့် အတူ ကျွန်မ တွေးထင်ထားသကဲ့သို့ပင် ကျွန်မကို အနည်းငယ် ပူပန်သော မျက်နှာမျိုးဖြင့် လှည့်ကြည့်နေတတ်သော အဖိုးအိုကို တွေ့ရပါသည်။ အမှန်ဆိုရလျှင် သူထိုင်နေသောနေရာမှ အနောက်တည့်တည့်ဆီသို့ လှည့်ကြည့်ရသောအလုပ်မှာ သူ့လို အသက်အရွယ်ရ လူကြီးတစ်ယောက်အတွက် သက်တောင့်သက်သာ မရှိလှမှန်း သိသာပါသည်။ လူငယ်တစ်ယောက်လို ခေါင်းကို ဆတ်ကနဲ သိသိသာသာ၊ သွက်သွက်လက်လက် ရုတ်တရက် လှည့်လိုက်နိုင်သည် မဟုတ်… ခန္ဒာကိုယ်ကိုပါ အသာ လှည့်ပြီးမှ ခေါင်းကို လှည့်နိုင်ခြင်းဖြစ်လေသည်။ သို့သော် သူသည် ထိုအပြုအမူကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအတွက် အမြဲ ပုံမှန် ပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ အချိန်အားဖြင့် စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သော ခင်မင်နှစ်လိုဖွယ်ရာ သူ့မျက်ဝန်း အကြည့်များကို စာဖတ်သူများ မြင်သာအောင် ပုံဖေါ်ပြစရာ စကားလုံး ရှာမတွေ့ပါ။ သို့သော် ကျွန်မ ကြိုးစား၍ ရေးပြချင်ပါသေးသည်။
ကျွန်မဆင်းရမည့် မှတ်တိုင်ကို လှမ်းမြင်နေရပြီဆိုလျှင် ကျွန်မထိုင်နေသော အနောက်ဖက်ခုံတန်းလေးကို မြင်နိုင်ရန် ခန္ဒာကိုယ်ကို ဖြေးဖြေးချင်း အရင်လှည့် ပြီးမှ ဦးခေါင်းကို လှည့်လာမည်။ ထို့နောက် ကျွန်မ အိပ်များပျော်နေမည်လား၊ ဆင်းရမည့်မှတ်တိုင် ရောက်တော့မည်ကို မသိပဲ မှိန်းနေမည်လား ဟူသော စိုးရိမ်မှု အရိပ်လက္ခဏာ၊ ကျွန်မက နိုးနိုးကြားကြားနှင့် ရှေ့လာမည့်မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် အသင့်အနေအထားကို တွေ့လိုက်ရသော် စိတ်ချလက်ချ ရှိသွားဟန် အကြည့်များ၊ ထိုအခါ ကျေကျေနပ်နပ်နှင့် နှုတ်ဆက်သလို ပြုံးယောင်သမ်းသော မျက်နှာ၊ အသိအမှတ်ပြုသလို ခေါင်းကို အသာဆတ်ပြပြီး တဖက်သို့ ပြန်လှည့်သွားဟန် တို့ကို နေ့စဉ် နေ့တိုင်း မြင်တွေ့ရပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူ လက်ကလေး အသာ မြှောက်ကာ နှုတ်ဆက်တတ်ပါသေးသည်။
ထိုသို့ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် မပျက်မကွက် တွေ့ရဖန်များလာသောအခါ ကျွန်မစိတ်ထဲတွင် သူ့ကို ဆွေမျိုးသားချင်းတစ်ယောက်ပမာ ခင်တွယ် နှစ်လိုလာခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်မတို့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ စကားမပြောဖူးကြပါ။ အနည်းဆုံး ဟိုင်း၊ ဟဲလို၊ ဂွတ်မောနင်း ဟူသော နှုတ်ဆက်စကားမျိုးပင် မပြောဖြစ်ကြပါ။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်အကြား အသံတိတ် ဆက်ဆံရေးတွင် စိုးရိမ်ပူပန်တတ်သော အကြည့်များ၊ အသိအမှတ်ပြုတတ်သော အကြည့်များ၊ စိတ်ချလက်ချရှိသွားသော အကြည့်များကသာ နေရာယူပါသည်။ ကျွန်မစိတ်ထဲတွင် အဆင်ပြေသော တစ်ရက်ရက်မှာ သူ့ကို မိတ်ဖွဲ့ကာ စကားပြော နှုတ်ဆက်ရန်၊ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောရန် တွေးထားမိပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို ကျွန်မ၏ ရုံးမှ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်နှင့် စကားစပ်ရင်း ပြောပြမိသောအခါ သူက နောက် သုံးလခန့် အကြာတွင် လမုန့်ပွဲတော် ရှိကြောင်းနှင့် ကျွန်မ သူ့ကို ကျေးဇူးတင်စွာ လေးစား ဂါရဝ ပြုလိုပါက လမုန့်တစ်ဗူးကို လက်ဆောင်အဖြစ် ၀ယ်ပေးနိုင်ကြောင်း၊ ယခုအချိန်မှာ စားဖွယ်သောက်ရာ တစ်ခုခု (သို့မဟုတ်) လက်ဆောင်ပစ္စည်း တစ်စုံတရာကို ရုတ်တရက်ကြီး ပေးလိုက်ပါက အနည်းငယ် ကိုးလိုးကန့်လန့်နိုင်လှကြောင်း (သည်နေရာတွင် သူက odd ဟူသော စကားလုံးကို သုံးနှုန်းပါသည်) ပြောပြပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းမွန်ပြီး ဆီလျော်သော အကြံပြုချက် ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်မ အလွန်ဝမ်းသာသွားပါသည်။ သည်လိုနှင့် တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် ကျော်လွန်လာခဲ့ရာ….
တိတိကျကျပြောရလျှင် လမုန့်ပွဲတော်အကြောင်းနှင့် ထိုအဖိုးအိုလေးကို လမုန့် လက်ဆောင်ပေးနိုင်ကြောင်း သိရပြီး တစ်ပတ်တိတိ အကြာ တနင်္လာနေ့ နံနက်တွင်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့က ကားမှတ်တိုင်သို့ ရောက်လျှင်ရောက်ခြင်း တစ်ခုခု လိုအပ်နေကြောင်း ကျွန်မ သတိထားမိလိုက်ပါသည်။ ထိုသည်ကား အမိုးနီ မှတ်တိုင်အောက် ခုံတန်းလေးတွင် ခပ်မတ်မတ် ထိုင်နေလေ့ရှိသော အဖိုးအိုကို မတွေ့ရခြင်းပင်။ ရုတ်တရက် ကျွန်မ စိတ်ပူသွားမိသည်။ သူ ဘာများ ဖြစ်လို့ပါလိမ့်၊ နေများ မကောင်းလို့လား၊ မနေ့က တွေ့တုန်းကရော… ဘာများ ထူးခြားနေသေးသည်လဲ၊ သူ့မျက်နှာ ကြည်ကြည်လင်လင် ရှိပါရဲ့လား.. ကျွန်မ မှတ်မိသမျှ ပြန်လည် ပုံဖေါ်တွေးတောနေမိပြီးမှ ကျွန်မ၏ အတွေးများကို အနည်းငယ် ရယ်မောလိုစိတ်ပင် ဖြစ်သွားပါသေးသည်။ အော်… တစ်ခါတစ်လေတော့ သူလည်း အနားယူတာ၊ ခွင့်ယူတာမျိုးတော့ ရှိနိုင်သည် မဟုတ်လား။ ဒီနေ့ မတွေ့ရလည်း မနက်ဖြန်ကျ ပြန်တွေ့ရမှာပဲ မဟုတ်လား… ဘာပူစရာ ရှိသလဲ… ဟု တွေးရင်းက ရုတ်တရက် ခံစားလိုက်ရသော စိုးရိမ် ပူပန်မှုကို မေ့ဖျောက်ကာ ဆင်းနေကျမှတ်တိုင် ကျော်မသွားစေရန်သာ ကျွန်မ သတိထားနေခဲ့ရပါသည်။
ညနေ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးချိန်၊ ညစာ စားသောက်ပြီး အိပ်ရာဝင်ခဲ့ချိန်အထိ နောက်တစ်နေ့ မနက်ကို ရောက်ရန် ကျွန်မ စိတ်စောနေခဲ့ပါသည်။ နောက်တစ်နေ့မနက် မှတ်တိုင်လေးကို ဟိုးဝေးဝေးထဲက ကျွန်မ လှမ်းကြည့်မိပါသည်။ လမ်းဘေးမှ ဓါတ်မီးတိုင်၏ အလင်းရောင်အောက်တွင် အမိုးနီမှတ်တိုင်ကလေးသည် အခါများစွာနှင့် မတူ၊ လူသူလေးပါး ကင်းစင်ကာ ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်လျက်။ ကျွန်မများ စိတ်စောပြီး ခါတိုင်းထက် အနည်းငယ် စောရောက်နေသောကြောင့်လား ဟု စိတ်ကို လှည်စားကာ လက်ထဲမှ နာရီကို ငုံ့ကြည့်လိုက်ချိန်မှာ နာရီလက်တံများက ခြောက်နာရီခွဲတိတိကို ညွှန်ပြလျှက်ရှိသည်။ ထိုအချိန်မှာပဲ ကျွန်မစီးရမည့် ဘတ်စ်ကားသည် မှတ်တိုင်ကလေးရှိရာဆီသို့ တရွေ့ရွေ့ နီးကပ်လာခဲ့တာ ဖြစ်သည်။ ကားပေါ်သို့ တက်လာခဲ့ရသော်လည်း ကျွန်မ၏ စိတ်များက မှတ်တိုင်ကလေးဆီသို့ လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်ဖြင့်၊ မြင်တွေ့နေကျ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော အဖိုးအိုထံတွင် ရစ်ဝဲလျက်။
သည်လိုနှင့် တစ်ရက် ၊ နှစ်ရက်မှ တစ်ပတ်တိတိ ကြာမြင့်ကာ နောက်တစ်ပတ် တနင်္လာနေ့သို့ ရောက်လာခဲ့ပြန်သည်။ သည်နေ့တော့ သူ့ကို ပြန်တွေ့ရလောက်ပြီဟု ကျွန်မ တွေးရင်း မှတ်တိုင်ကလေးဆီသို့ ခပ်သွက်သွက် လျှောက်လာခဲ့ပါသည်။ သို့သော် မှတ်တိုင်ကလေးတွင် ကျွန်မ တွေးထင် မျှော်လင့်ထားသော ထိုအဖိုးအိုကို မတွေ့ရပါ။ ထိုအခါ ကျွန်မ စိတ်ထဲတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အတွေးပေါင်းစုံဖြင့် ယောက်ယက်ခတ်နေခဲ့ပါသည်။ သူ အလုပ် မလုပ်တော့ဘူးလား၊ သို့တည်းမဟုတ် အလုပ်ချိန်ပြောင်းသွားသည်လား၊ အလုပ်လုပ်သော နေရာ ပြောင်းသွားသည်လား၊ အိမ်ပြောင်းသွားသည်လား၊ နေမကောင်း ထိုင်မသာ ဖြစ်နေသည်လား၊ နောက်ဆုံး မပြောကောင်း မဆိုကောင်း တစ်ခု တစ်ခုများ ဖြစ်သွားသည်လား… ဟူသော အဆင့်အထိ ကျွန်မ တွေးမိကြောင်း ၀န်ခံရပါမည်။ ယခုမူ ကျွန်မ၏ စိတ်သောကကို မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ နားလည်နိုင်မည် မဟုတ်၊ ကျွန်မ မြင်တွေ့နေကျ ထိုအဖိုးအိုကလေး၏ နှစ်လိုဖွယ် ဂရုစိုက်မှုနှင့် မျက်ဝန်းများမှာ တွေ့ရလေ့ရှိသော ခင်မင်မှုကို မည်သူကမှ နားလည်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်။ ကျွန်မကလည်း သူနှင့် ပတ်သက်သမျှ ဘာဆို ဘာမှ မသိခဲ့၊ သိအောင်လည်း မကြိုးစားဖြစ်ခဲ့။ ယုတ်စွအဆုံး ကားမှတ်တိုင်ကလေး ရှိရာသို့ မည်သည့်အရပ်မျက်နှာဆီမှ လမ်းလျှောက်လာသည်ကိုပင် ကျွန်မ မသိခဲ့ချေ။
မှတ်မှတ်ရရ အဖိုးအိုလေးကို မတွေ့ရသည်မှာ မနေ့က တနင်္လာနေ့တွင် သုံးလ ပြည့်ခဲ့သည်။ ကျွန်မရုံးမှ မိတ်ဆွေ ပြောခဲ့သော လမုန့်ပွဲတော်ရက်များလည်း ရောက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ လူစည်ကားသော နေရာတိုင်းမှာ မီးပုံးရောင်စုံကလေးများနှင့်အတူ လမုန့် အရောင်းဆိုင်များလည်း စည်ကားနေပြီ ဖြစ်သည်။ အရောင်အသွေးစုံလင် လှပသော လမုန့်ဗူးများကို မြင်တိုင်း နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေကျ၊ ကျွန်မကို ဂရုတစိုက်ရှိနေကျ အဖိုးအိုကလေးကို လက်ဆောင်ပေးရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ဖူးကြောင်း အခါမလပ် သတိရနေခဲ့တာ ဖြစ်သည်။ အဖိုးအိုလေးကို သတိရစိတ်၊ သူ ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့် ဟူသော ပူပန်စိတ်တို့နှင့်အတူ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အို… သူ နေကောင်း ကျန်းမာနေမှာပါ၊ အလုပ်က အနားယူပြီး ဘ၀ကို သက်တောင့်သက်သာ ဖြတ်သန်းနေမှာပါ၊ သူ စိတ်ရော ကိုယ်ရော ချမ်းသာ နေမှာပါ ဟု တွေးကာ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်၊ သတိရစိတ်တို့နှင့်အတူ နောက်ကျခဲ့လေခြင်း ဟူသော နောင်တတို့ကို ဖြေဖျောက်ရသည်။
ထိုအချိန်များတွင် ကျွန်မ အတတ်နိုင်ဆုံးနှင့် အဆီလျော်ဆုံး အလုပ်မှာ ကျွန်မ စိတ်ထဲမှ တိတ်တဆိတ် ရင်းနှီးခင်မင်လျက်ရှိသော အဖိုးအိုလေး ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး အသက်ရှည် အနာမဲ့ကြောင်း ဆုတောင်းပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတော့သည်။
(၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄)
- Look Magazine - February 2015 တွင် ဖေါ်ပြပြီး ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် - မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က သူ ကိုယ်တွေ့ကြုံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့အတူ သူ ခံစားရတာတွေကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။ သူနဲ့ ထပ်တူ အတတ်နိုင်ဆုံး အနီးစပ်ဆုံး ခံစားရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။
Posted by သက်ဝေ at 8:40 PM 19 comments:
တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မသိခဲ့ဖူးသော လူစိမ်းနှစ်ယောက်၊ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် စတင် ခင်မင် သိကျွမ်းကြရာတွင် အနေအထား အမျိုးမျိုးရှိနိုင်၏။ သို့သော် သူနှင့် ကျွန်မ သိကျွမ်းခဲ့ရပုံမှာမူ မည်သို့မျှ မထူးခြားချေ။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ကို မည်သူကမျှ ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ကာ မိတ်ဆက်မပေးခဲ့၊ ထို့ကြောင့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်က “အခုလို ခင်မင်သိကျွမ်းခွင့်ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်…” ဟူသော သံတမန်ရေးရာဆန်ဆန် စကားအပိုများ ပြောစရာမလိုခဲ့ကြ၊ လူမြင်သူမြင်ကောင်းအောင် လှလှပပလေး ပြုံးရယ်ကာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်စရာလည်း မလိုအပ်၊ ကျွန်မက သူ့ကို သူမှန်း သိနေခဲ့ပြီး သူကလည်း ကျွန်မကို ကျွန်မမှန်း ကြိုတင် သိနှင့်နေခဲ့သည်။ သည်လိုနှင့် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် အလိုလို မိတ်ဆွေ ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။
အမျိုးသားတစ်ယောက်နှင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် မိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြသည် ဟူသော စကား၏နောက်တွင် မည်သည့် အကြောင်းအခြင်းအရာများနှင့် မည်သို့သော ပညတ်ချက်များ ပါဝင်နေမည်ကို ကျွန်မ မသိပါ။ သိစရာလည်း မလိုအပ်သလိုသိအောင်လည်း မကြိုးစားခဲ့ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်သည် အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာပင်လွန်စွာ ရင်းနှီး ခင်မင်သော မိတ်ဆွေများ ဖြစ်သွားခဲ့ကြ၏။
မိတ်ဆွေဘဝတွင် ကျွန်မတို့ စကားများစွာ ပြောဖြစ်ကြသည်။ ပြောဖြစ်သမျှ စကားများသည် အမျိုးအမည် မတူ၊ အမြီးအမောက် မတည့်သော စကားများဖြစ်သလို အကြောင်းအရာများကလည်း တစ်နေ့ တစ်မျိုး မရိုးရအောင် စုံလင်လှသည်။ သူက အလုပ်လာသောအခါ ဖြတ်လျှောက်ရသော လမ်းကလေး၏ လှပစွာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပုံကို ပြောလျှင် ကျွန်မက ညက ဆိုးလာသော လက်သည်းနီအရောင်မှာ နက်ပြာရောင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျွန်၏ လက်ချောင်းများပေါ်တွင် ထူးခြားစွာ ပေါ်လွင်လှပနေကြောင်းကို မဆီမဆိုင် ပြောလေ၏။ သူ၏ နေ့လည်စာမှာ ပင်လယ်စာနှင့်အရွက်စိမ်းကြော် အနည်းငယ် ဖြစ်သည်ဟု ပြောလျှင် ကျွန်မက မနက်က ဖတ်ခဲ့ရသော ပျောက်ဆုံးလေယာဉ်ပျံ သတင်းကို စိတ်ပါလက်ပါ ပြောမိ၏။ သူက လမ်းများများ လျှောက်တိုင်း သူ့ခြေဖ၀ါးများ နာကျင်လှသည်ဟု ပြောလျှင် ကျွန်မက Espresso Double Shot ၏ ပြင်းရှ ခါးသက်သော အရသာကို မစားရ ဝခမန်း တဖွဲ့တနွဲ့ ပြောပြမိလေ၏။ သူက ညက ဘောလုံးပွဲရှုံးသောကြောင့် စိတ်ညစ်နေကြောင်းပြောလာလျှင် ကျွန်မက ကျွန်မ၏ ငယ်ဘဝအကြောင်းနှင့် ကျွန်မ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသော ဗိုလ်အုန်းသီးစက်ဘီးအကြောင်းကို စိတ်လိုလက်ရ မနားတမ်း ပြောလေ့ရှိ၏။
ပြောရလျှင် သူက ကျွန်မကို စာများများ ဖတ်စေချင်သည်၊ စာများများ ရေးဖြစ်စေချင်သည်၊ ကြိုးစားစေချင်သည်။ သို့သော် ကျွန်မက နှင်းဆီတစ်ပွင့်တွင် ပွင့်ဖတ် အရေအတွက် မည်မျှရှိသည်၊ နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်၏ အရိုးတံ အရှည်တစ်လက်မတွင် ဆူး ဘယ်နှစ်ချောင်းရှိသည် တို့ကို အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ ရေတွက်ကာ ပျော်ပျော်ကြီး အချိန်ဖြုန်းနေတတ်၏။ ထို့အပြင် သူ ရည်ညွှန်းသောစာအုပ်များကို ချောင်ထိုးကာ ကာတွန်းတင်အောင်နီ၏ ပြာဂလောင်၊ ပြာလချောင်၊ ကိုထူးဆန်းနှင့် မခင်ချောဆွိတို့ကို ဖတ်ရင်း သဘောတွေ့ကာ တခွိခွိ ရယ်နေတတ်၏။ အဆိုးဆုံးမှာ ဂိမ်း ဖြတ်ရန်ကိစ္စပင်၊ သူက ကျွန်မကို အချိန်ကုန်စေသော ဂိမ်းများကို မဆော့စေချင်တော့၊ ကျွန်မကလည်း ထိုဂိမ်းများကို ခေါင်းအကိုက်ခံ၊ မျက်စိအညောင်းခံ၊ လက်အနာခံကာ ညမအိပ်ပဲ ပေပေတေတေ ဆော့တတ်သည်။
သူက စိတ်ထားသဘောထား နူးညံ့ပျော့ပြောင်းသလောက် ကျွန်မက အကြောင်းမဲ့ မာရေ ကျောရေ နိုင်လှသူ တစ်ယောက်သာ။ သူပြောလေ့ရှိသော စကားများသည် ကတ္တီပါပန်းတစ်ပွင့်၏ ပွင့်ချပ်များပမာ အစဉ်အမြဲ ချောမွေ့နူးညံ့နေတတ်သော်လည်း ကျွန်မ၏တုန့်ပြန်မှုက ဟော်လိုဂစ်တာတစ်လက်၏ နံပါတ်တစ်ကြိုးပမာ မာကျော စူးရှနေတတ်၏။ သူက နှင်းဆီပွင့်ဖတ်နုနုကလေးများကို ရိုက်ထားသော ဓါတ်ပုံများပို့လျှင် ကျွန်မက နှင်းဆီဆူးများကို အနီးကပ်ရိုက်ထားသောပုံများ ပြန်ပို့မိ၏။ ထို့အပြင် ထုံနေသည် ဟူသော စကားတစ်ခွန်းဖြင့်လည်း ကိုယ် မပြောလိုသော အကြောင်းအရာများ၊ အဖြေမပေးချင်သော မေးခွန်းများကို ပေတိပေကပ်ဖြင့် လွှဲရှောင်တတ်သေး၏။ သူက တစ်စုံတရာ အဆင်မပြေတိုင်း Restart ပြန်ချရသည်မှာ မကြာခဏ ဟု ပြောတတ်သော်လည်း ကျွန်မကမူ Restart နှင့် U-Turn ဟူသော စကားများကို အကြားနှင့်ပင် ခါးသက်သူ ဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်း ကြေငြာထားတတ်လေ၏။
ကျွန်မစကားပြောပုံ အချိုးမပြေလျှင် နားရင်းအုပ်ချင်သည်ဟု သူက ပြောသော် ကျွန်မက လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားသည်ဟု ပြန်ပြောလေ့ရှိ၏။ သည်အချိန်တစ်ခုသာ ရောင်းသူ ၀ယ်သူ အသံတူသည်ဟု ပြောဖြစ်တော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် အသံထွက်ကာ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောမိကြ၏။ အမှန်ဆိုရပါမူ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်သည် အချိန်တော်တော်များများတွင် အကြိုက်ချင်းမတူ၊ ဘာသာစကားချင်းမတူ၊ သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်၊ ပြောလေ့ရှိသော စကားများ၏ အတိမ်အနက် မည်သို့ပင် ကွဲပြားစွာ မတူညီကြသည်ဖြစ်စေ များစွာ ခင်မင်ရင်းနှီးသော၊ တစ်ယောက်အကြောင်းကို တစ်ယောက်က ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ သိနားလည်နေကြသော စကားပြောဖေါ် မိတ်ဆွေများသာဖြစ်ကြ၏။
မိတ်ဆွေဘ၀ဖြင့် ရပ်တည်ရင်း အချိန်ကြာလာလေ သံယောဇဉ်များ ပိုမို နက်ရှိုင်းလေ ဖြစ်လာကြသည်ကို ဖာသာ သိကြလေသည်။ ထိုသံယောဇဉ်များသည် အရောင်မရှိ၊ ပကတိ ဖြူစင် သန့်ရှင်းသည်ဟု အတွေးထဲက စွဲမြဲ ယုံကြည်နေကြသလိုပင်။ သို့သော် တရစ်ထက် တစ်ရစ် တိုးလာသော သံယောဇဉ်များ၊ တွယ်တာမှုများ၊ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုများနှင့် နွေးထွေးသော အကြင်နာ မေတ္တာများ၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် အများသူငါတို့ တွေးတော ထင်မြင်ထားတတ်ကြသော ပုံသေကားချပ်အတိုင်း အချိန်မရွေး ချစ်သူများ ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင်ဟူသော အချက်ကိုမူ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံး စိတ်တူ ကိုယ်တူ မေ့ထားခဲ့ကြလေသည်။
ထိုညနေက ထုံးစံအတိုင်းကျွန်မတို့ စကားပြောဖြစ်ပြန်၏။ အခါများစွာမှာ အကြောင်းအရာစုံ ပြောတတ်သောသူက ထူးထူးခြားခြား အနည်းငယ် တိတ်ဆိတ်နေရင်းက ကျွန်မပြောသမျှ နားထောင်မည်ဟု ဆို၏။ ကျွန်မက ရုတ်တရက် ဘာပြောရမှန်းမသိသောကြောင့် ရေးလက်စ စာတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ပြမည်ဟု ပြောသောအခါ သူက နားထောင်ရန် အလွယ်တကူ သဘောတူလေသည်။ ထိုအခါ ကျွန်မရေးထားသော Bouncing Ball ကလေး တစ်လုံးအကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖတ်ပြလိုက်မိ၏။
“ညနေက Bouncing Ball ဟု ခေါ်လေ့ရှိကြသော ဘောလုံးကလေးတစ်လုံး မမျှော်လင့်ပဲ လက်ထဲ ရောက်လာသည်။ ဘောလုံးကလေး၏ အရောင်မှာ အဝါရောင် ဖြစ်သည်။ ထိုဘောလုံးကလေးကို လှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်သော် ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မရှိ၊ သာမန်ဘောလုံးကလေး တစ်လုံးမျှသာ။ သို့သော်လည်း သူ့တွင် အခြားဘောလုံးကလေးများနှင့်မတူသော အစွမ်းသတ္တိ တစ်မျိုးရှိနေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့အစွမ်းကို စမ်းသပ်ကြည့်ရမည်။ ပထမတော့ မည်သို့ စတင်ပြီး မည်သည့်နည်းနှင့် ဆော့ကစားရမည် မသိ၊ နောက်တော့ မရဲတရဲနှင့် ကြမ်းပေါ်သို့ အသာ ပစ်ချကြည့်လိုက်မိသည်။ ထိုအခါ ဘောလုံးကလေးက လက်ထဲမှ အသာအယာ လျှောချသွားသည်။ ထို့နောက် ကြမ်းပြင်နှင့် ထိတွေ့ပြီးပြန်လည် ခုန်ထလာခဲ့သည်။ ကြမ်းပြင်မှ တစ်ပေသာသာ အကွာအဝေးကို ပြန်လည် မြောက်တက်လာသော ဘောလုံးကလေးကို ချက်ချင်း အမိအရ ပြန်လည် ဖမ်းဆုပ်လိုက်သည်။ ထိုဘောလုံးကလေး၏ ဟန်ပန်တွင် စ်ိတ်ဆိုးမာန်ဆိုး မဟုတ်သော်လည်း မခံချင်စိတ်ကလေး တစ်စွန်းတစ်စကို လှစ်ကနဲ မြင်တွေ့လိုက်ရသည်။”
ကျွန်မ၏စာ ပထမတစ်ပိုဒ် အဆုံးတွင် သူက “အိုး…. ဘောလုံးနဲ့ ကစားနေတုန်းကိုး… မင်းကတကယ့် ကလေးလေးပဲ…” ဟု တိုးဖွဖွ ရယ်မောသံနှင့်အတူ မှတ်ချက်ပြု၏။ သို့သော် သူ့ကို ကောင်းကောင်းသိသော ကျွန်မက ထိုစကားမှာ သူ ဟန်လုပ်ကာ ပြောသော စကားမှန်းလည်း သိလိုက်ပါသည်။ ကျွန်မ ဘာမှမတုန့်ပြန်ဖြစ်ပါ။ နောက်တစ်ပိုဒ် ဆက်ပြီး ဖတ်ပြရမလား ဟုသာ မေးလိုက်သည်။ သူက အိုး…သေချာတာပေါ့… ဟု အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ပြော၏။ သူ့အသံမှာ အနည်းငယ် ခြောက်သွေ့အက်ကွဲနေသလိုပင်။ ကျွန်မ စာကို ဆက်ဖတ်ပါသည်။
“ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် အားကလေး အနည်းငယ်ထည့်ကာ ပစ်ချကြည့်မိပြန်သည်။ ကိုယ်ထည့်လိုက်သော အားအတိုင်း ဘောလုံးကလေး ကြမ်းပေါ်သို့ ခုန်ဆင်းသွားခဲ့သည်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ရိုက်ခတ်ပြီး ချက်ချင်းပြန်လည် မြောက်တက်လာခဲ့သည်။ ပစ်ချစဉ်က ထည့်လိုက်သော အားကြောင့် ပထမတစ်ကြိမ်ကထက် ပို၍မြင့်မားစွာ နှစ်ပေနီးနီး မြောက်တက်လာလေသည်။ ထို့နောက် တတိယအကြိမ်၊ စတုတ္ထအကြိမ်၊ ပဉ္စမအကြိမ်… အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထိုဘောလုံးကလေးကို ပစ်ချလိုက် ပြန်ဖမ်းလိုက်ဖြင့် ဆော့ကစားနေမိလေသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ကျွန်မ၏စိတ်အစဉ်သည် ထိုဘောလုံးကလေးနေရာသို့ တခဏမျှ ဝင်ရောက် ပူးကပ်သွားလေ၏။ ထိုအခါ အဝါရောင် Bouncing Ball ကလေးသည် ကျွန်မ ဖြစ်သွားခဲ့၏…”
ကျွန်မ စာဖတ်သံ အဆုံးတွင်သူ့ဆီမှ သက်ပြင်းချသံဟု ထင်ရသော အသံတစ်ခုကို ခပ်တိုးတိုး ကြားလိုက်ရ၏။ စကားဖြတ်ပြောရလျှင် ကျွန်မက နားသိပ်ပါးသူ၊ အကင်းလည်း ပါးသူ တစ်ယောက်သာ။ သူသည်လည်း ကျွန်မလောက် နားမပါးသော်လည်း အကင်းပါးသူ တစ်ယောက်မှန်း ကျွန်မ သေသေချာချာ သိနေပါသည်။ မိနစ်ဝက်ခန့်ကြာသည်အထိ သူ့ဆီက မည်သည့်စကားမျှ မကြားရသောအခါ ကျွန်မ ရင်တထိတ်ထိတ် ခုန်လာခဲ့သည်။ ဖုန်းကိုင်ထားသောလက်ချောင်းများ အေးစက်တုန်ယင်ကာ ပါးပြင်တို့သည်လည်း အံ့သြစရာကောင်းစွာ ပူနွေးလာခဲ့၏။
သို့သော် ကျွန်မ အသံကိုအတတ်နိုင်ဆုံး ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကာ “ဟေ့… ဘာတွေ တွေးနေတာလဲ…” ဟု မေးလိုက်သည်။ ထိုအခါ သူက “တတိယတစ်ပိုဒ် ဆက် ရေးပြီးပြီလား၊ ဖတ်ပြအုံးမှာလား….” ဟု ပျက်ယွင်းမယောင်ဖြစ်နေသော အသံကို ကြိုးစား ထိန်းချုပ်ကာ ခပ်တိုးတိုး ပြန်မေး၏။ ကျွန်မ လှိုက်ကနဲ ပျော်ရွှင်သွားခဲ့၏။ အခြေအနေကို ပါးနပ်စွာ ရိပ်စားလိုက်မိသော ကျွန်မက မရေးရသေးပါ… ဟု ညာပြောလိုက်သည်။ အမှန်ကို ၀န်ခံရပါမူ ကျွန်မစာမှာ တတိယစာပုဒ်သာမက အဆုံးအထိပင် ရေးပြီးသား ဖြစ်လေ၏။ မလှပသော မာရေကျောရေစိတ်တို့ဖြင့် ဇာတ်သိမ်းထားပြီးလည်း ဖြစ်၏။ သည်လိုနှင့် တစ်ညနေ လွန်မြောက်ခဲ့သည်။
ထိုညမှာပင် ကျွန်မ ရေးလက်စစာကို နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဖတ်ကာ အရင်နေ့က ရေးသားခဲ့သော မလှမပ အဆုံးသတ်ကို စိတ်လိုလက်ရပြန်လည် ပြင်ဆင်လိုက်မိ၏။ သာယာလှပကာ ချိုမြသော အဆုံးသတ် ဖြစ်၏။ အဆုံးသတ်မှာ ဤသို့…။
“ဟန်ဆောင်မှုကင်းစင်စွာဖြင့် အထင်အရှား တွေ့မြင်နေရသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို Bouncing Ball လေး တစ်လုံးသဖွယ် သဘောထားက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆော့ကစားတတ်သူ၊အကြိမ်ကြိမ် အဖန်ဖန် ပစ်ချတတ်သူ၊ မြောက်တက်လာလျှင်သော်မှ ချစ်ခင်ဟန်ပြ အသာအယာ ပြန်လည် ဖမ်းဆုတ်ယူပြီး နောက်တဖန် ပြန်လည် ပစ်ချရန်လည်း စိုးစဉ်းမျှ ဝန်လေးဟန် မပြတတ်သူ၊ ဘောလုံးကလေး၏ အကြိမ်ကြိမ်သော နာကျင်မှုတို့ကိုလည်း အနည်းငယ်မျှ ဂရုမပြု အလေးမထားသူ၊ သို့သော်လည်း ကျွန်မ သူ့ကို အတိုင်းအဆမဲ့ ချစ်ခင် မြတ်နိုးလှသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့အတွက် မည်သို့ပင် အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ပစ်ချလိုက်သော်လည်း ပြန်လည် ခေါင်းထောင် မလာနိုင်/မလာတတ်သော ရိုးရိုးသာမာန် ဘောလုံးကလေး တစ်လုံး၊ ထားရာနေရာမှာ ငြိမ်သက်စွာ ရပ်တည်နေတတ်သော ဘောလုံးကလေးတစ်လုံး အဖြစ်နှင့်သာ ဆက်လက် ရှင်သန်သွားတော့မည်ဟု ကျွန်မ နှစ်လိုစွာ ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတော့သည်…”
ထိုစာတစ်ပုဒ်ကို အောင်မြင်စွာ အဆုံးသတ်ပြီးသောအချိန်သည် အရင်အခါများနှင့်မတူ၊ ထူးခြားစွာ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်နေခဲ့၏။ကြည်နူး ပျော်ရွှင်နေခဲ့၏။ စာကို အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ဖတ်ရင်း ကျေနပ်နှစ်သက်သော စိတ်များက ကျွန်မ တစ်ကိုယ်လုံးအနှံ့ လွှမ်းမိုးနေခဲ့၏။ ပို၍သေချာစေရန် နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ် အချောသတ်ပြန်ဖတ်၊ စကားလုံး အထားအသို အလွဲများ၊ စာလုံးပေါင်းများ မှန် မမှန် ပြန်လည် စစ်ဆေးကာ ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ချလိုက်၏။ သို့သော် ထိုညက ကျွန်မ အိပ်မပျော်ပါ။
နောက်တစ်နေ့ ညနေတွင် ထုံးစံအတိုင်း စကားပြောဖြစ်သောအခါ သူ့အသံတွင် တစ်ခုခု လိုအပ်နေကြောင်း ကျွန်မ သေသေချာချာ သိလိုက်သည်။ ထိုအရာမှာ အကြည်ဓါတ်တချို့ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ကျွန်မ ကျေနပ်နေခဲ့၏။ “စာ အဆုံးသတ်ပြီးပြီလား” ဟု သူက မမေ့မလျော့ မေးလာသောအခါ ကျွန်မက ပြီးပါပြီ… ဟု ဖြေလိုက်၏။ သူက အခါများစွာကလို သူ့ကို ဖတ်ပြပါ (သို့မဟုတ်) မေးလ်ထဲကို ပို့ပေးပါဟု မတောင်းဆို၊ ကျွန်မကလည်း ဖတ်မလားဟု မမေးဝံ့၊ မမေးရဲ… သည်လိုနှင့် ထိုနေ့က စကားသံများ အသက်မပါ၊ အလွန်တရာ အေးစက် ခြောက်သွေ့ခဲ့ရ၏။
ထိုနေ့မှစကာ ရက်အနည်းငယ်ကြာသည်အထိ သူနှင့် ကျွန်မ စကားမပြောဖြစ်ကြပါ။ အကြောင်းမဲ့ တိတ်ဆိတ်ခြင်း မဟုတ်မှန်း သူရော ကျွန်မပါ သိနေကြပါသည်။ စကားပြောနေကျ အချိန်များတွင် သူလည်း အလိုလို သတိရနေလိမ့်မည်ဟု ကျွန်မ ယုံကြည်နေမိပါသည်။ စာဖတ် ၀ါသနာကြီးပြီး စာတစ်အုပ်ရလျှင် ထိုစာအုပ်ကို လက်က မချတမ်းဖတ်နေတတ်သော သူ၊ ကျွန်မ၏ အရိပ်အကဲကိုလည်း အလွန်မှန်ကန်စွာ ဖတ်တတ်သောသူသည် သည်တစ်ကြိမ်တွင်တော့ အလွဲကြီး လွဲနေခဲ့ပြီ။ သည်အတွက်လည်း ကျွန်မ သူ့ကို အနည်းငယ် အားမလို အားမရ ဖြစ်ရုံမှအပ အပြစ်တင်လိုစိတ် လုံးဝ မရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်မ သူ့ကို အမှန်ပင် ချစ်ခင်စွာ ရင်းနှီးနှစ်လိုစိတ်ရှိပါသည်။
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဆက်နွှယ်ပတ်သက် ရင်းနှီးမှုတိုင်းအတွက် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကာလများစွာထဲက အရိုးစွဲနေသော၊ အကြောင်းအရာ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုခုဆိုလျှင် မှားမှား မှန်မှန် အမျိုးသားဖက်မှသာ အရင် စတင်ဆက်သွယ်ရမည်၊ အမျိုးသမီးဖက်မှ စတင် ဆက်သွယ်လိုက်လျှင် အမျိုးသမီး သိက္ခာကျသည် ဟူသော ခပ်ကြောင်ကြောင် ပညတ်ချက်တစ်ခုကြောင့်တော့ သူနှင့်ကျွန်မ မဝေးကွာသင့်၊ ဤနည်းဖြင့်ဝေးကွာ မသွားစေရ။
ထိုအတွေးနှင့်အတူ ကျွန်မသူ့ကို သွားတွေ့ရန်၊ သူ့အနားကို အရောက်သွားရန် စဉ်းစားမိ၏။
သူ့ကို တွေ့လျှင် ပြောစရာစကားများစွာ စီကာ စဉ်ကာ စုစည်း သိမ်းဆည်းထားမိ၏။ ပြောပြရန် ရည်ရွယ်ထားသည်များကို မမေ့မလျော့စေရန် အထပ်ထပ် မှတ်သားနေမိ၏။ သူ့ကို ပေးဖတ်ရန် ဘောလုံးကလေး အက်ဆေးကိုလည်း အသင့်ပြင်ထားမိ၏။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ သူ့ကို ကျွန်မ လာတွေ့မည် ဖြစ်ကြောင်း တိုးတိမ်စွာ၊ပြီးတော့ အနည်းငယ် ရှက်ရွံ့စွာဖြင့် ဖုန်းဆက် အသိပေးလိုက်ရ၏။ ခရီးသွားဟန်လွှဲ လာတွေ့ခြင်းဟု ကျွန်မ ဟန်မဆောင်ချင်ပါ။
ဖုန်းထဲမှာ ကြားရသော သူ့အသံတွင် ကျွန်မက စတင် ဆက်သွယ်လာခြင်းအတွက် လှိုက်လှဲ ၀မ်းမြောက်ဟန်ကို အလျဉ်း မတွေ့ရပါ။ ထိုမျှသာမကကျွန်မ စိတ်က ထင်နေ၍လား မသိ၊ သူ့အသံတွင် တစ်စုံတစ်ရာကို စိုးရွံ့ ပူပင်နေသယောင် အပြင် အနည်းငယ် စိတ်ရှုပ်ဟန်ပါ စွက်နေသည်ဟု ကျွန်မ ခံစားရပါသည်။ ကျွန်မ စကားကြောင့် သူ အံ့သြသွားလေမလား ဟုတွေးမိသော်လည်း သူ မအံ့သြပါ။ သူကသာ ကျွန်မကို အံ့အားသင့် မှင်သက်သွားစေသော စကားတစ်ခွန်းကို ပြောလိုက်တာ ဖြစ်သည်။ သုံးနှစ်တာ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သော အလုပ်ခွင်သင်တန်းတစ်ခုအတွက် ခရီးသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူ့ကို ကျွန်မ လာတွေ့မည်ဟု ပြောသော အချိန်တွင် သူသည် လေယာဉ်ကွင်းတွင် ရောက်နေမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ပုံမှန်ထက် နားလည်ရခက်သော၊ သူ့စိတ်ကို ခန့်မှန်းရခက်သော အေးစက်စက် လေသံမျိုးဖြင့် ပြောလေ၏။
ရုတ်တရက် ခပ်ပြင်းပြင်း ဖြတ်အရိုက်ခံလိုက်ရသူတစ်ယောက်ပမာ ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်အောင် ကျွန်မ အငိုက်မိသွားခဲ့ရ၏။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း ကျွန်မ သူ့ကို တွေ့ဖြစ်အောင် သွားတွေ့မည်။ ထို့ကြောင့် သွားမည့်နေ့တွင် လေယာဉ်ကွင်းသို့ လာတွေ့မည်ဟု ပြောလိုက်ပါသည်။ သူက ကျွန်မ၏စကားကို ကောင်းသည် ဆိုးသည် တစ်စုံတစ်ရာ မပြောပဲ သူ့ထုံးစံအတိုင်း သေချာတာပေါ့ ဟုသာအင်္ဂလိပ်စကားဖြင့် တုံ့ပြန်ပါသည်။
ထိုနေ့မနက်က မိုးတွေ မှိုင်းကာညို့နေ၏။ သူ့ကို ပေးဖတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသော ဘောလုံးကလေး အက်ဆေးကို ကျွန်မလက်ရေးဖြင့် စာရွက်ပေါ်တွင် သေသေသပ်သပ်ကလေး ကူးရေးကာ စာအိတ် အညိုရောင်ဖြင့် ထည့်ယူလာခဲ့သည်။ ၀မ်းနည်းစိတ်တစ်ချို့ကို မျက်နှာပေါ်တွင် မပေါ်အောင် ထိန်းချုပ်ရင်း လေဆိပ်သို့အသွား လမ်းတဝက် အရောက်တွင် မိုးရွာလေ၏။ ရွာသည်မှ သည်းကြီး မည်းကြီးနှင့်၊ အညှိုးတကြီး ရွာနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဘေးဘီဝဲယာမှာ ဘာမှမမြင်ရ မတွေ့ရ။ ဖြစ်ချင်တော့ လေဆိပ်သို့ သွားရာလမ်းတွင် လေဆိပ်ထဲသို့ ကွေ့ဝင်စရာU-Turn (ဂငယ်ကွေ့) တစ်ခုရှိနေ၏။ မိုးဖျက်သောကြောင့် ကျွန်မ ထိုဂငယ်ကွေ့ကို ရုတ်တရက် မမြင်လိုက်ပဲ ကျော်လွန်သွားခဲ့သည်။ ထိုနေရာမှ မကွေ့လိုက်နိုင်လျှင် နောက်ထပ် ကွေ့ဝင်စရာ ဂငယ်ကွေ့ တစ်ခု မရှိတော့ပါ။ ကွေ့ရမည့်နေရာတွင် အချိန်မီ မကွေ့လိုက်နိုင်ပဲ လမ်းကြောင်း လွဲချော်သွားသောကြောင့် နောက်ထပ် မိုင်တိုင် တော်တော်များများ ကျော်လွန်သွားပြီးမှသာ ပြန်လှည့်၍ ရနိုင်တော့မည်။ ထိုအခါ သူ့ လေယာဉ်အချိန်ကို အမှီရောက်နိုင်ရန် အလွန် ခက်ခဲသွားပြီဖြစ်သည်။ သေချာသည်… ဘယ်နည်းနှင့်မျှ သူရှိရာကို အချိန်မီ မရောက်နိုင်တော့ပါ။ အတွေးနှင့်ပင် ၀မ်းနည်းမှုတို့က အဆပေါင်းများစွာ ထူထပ် သိပ်သည်းလာခဲ့သည်။
သူ… ကျွန်မအလာကို မျှော်နေမည်လား၊ ကျွန်မ အချိန်မီရောက်မလာလျှင် ကျွန်မ၏ သဘောထားကို သူ မည်သို့ ကောက်ချက်ဆွဲသွားမည်လဲ၊ ကျွန်မ စိုးထိတ်စွာ ကြောက်ရွံ့နေမိ၏။ အလုပ်များလှသည့်အပြင် အချိန်ကို အလွန်လေးစားပြီး စည်းကမ်းကို တိကျစွာ လိုက်နာတတ်သော သူသည် လေဆိပ်အပြင်ဖက်တွင် ကျွန်မကို မျှော်တငေးငေးဖြင့်ရှိနေလိမ့်မည် မဟုတ်။ ပြောထားသည့်အချိန်မှာ ကျွန်မ ရောက်မလာလျှင် မိနစ်အနည်းငယ်မျှပင်ကျော်လွန် စောင့်ဆိုင်းလိမ့်မည် မဟုတ်သည်ကို မည်သူနှင့်မဆို အလောင်းအစား လုပ်ရဲပါသည်။ သေချာသည်ကတော့ သည်နေ့အဖို့ ကျွန်မ သူနှင့် တွေ့ရန် ဘယ်နည်းနှင့်မျှ မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ ထို့အတူ ကျွန်မတို့နှစ်ဦး အကြားမှ တင်းမာမှုကိုလည်း ဘယ်နည်းနှင့်မျှ ကျွန်မ ချေဖျက်နိုင်မည် မဟုတ်တော့ပါ။
အတွေးများဖြင့် နာကျင်ဝမ်းနည်းနေရင်းက ကားမှန်ပေါ်သို့ ရိုက်ခတ်လာသော မိုးရေစက်များနှင့်အတူ မျက်ရည်စက်အချို့ကိုသာ ကျွန်မ ကိုယ်စား သူ့အနားသို့ စေလွှတ်လိုက်နိုင်တော့သည်။ သူ့ကို ပြောပြရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သောစကားများနှင့်အတူ ကျွန်မ ရေးခဲ့သော၊ သူ မသိလိုသော Bouncing Ball ကလေးအကြောင်း အဆုံးသတ်ကိုလည်းသူ့ကို ပြောပြခွင့် ရမည် မဟုတ်တော့ချေ။
ဘယ်တော့မှလည်း ပြောပြခွင့်ရမည် မဟုတ်တော့ပါချေ။
(၁၆ မတ် ၂၀၁၄)
Posted by သက်ဝေ at 12:47 PM 11 comments:
အင်မတန် ငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုပဲ ဟု ခပ်တိုးတိုး အသံပြုကာ ညည်းညူနေခဲ့မိသည်။ လက်ထဲတွင် ကိုင်ထားသော စာအုပ်ထဲမှ ယနေ့ဖတ်ဖြစ်သော စာမျက်နှာကို အမှတ်အသားပြုကာ ဘေးသို့ ချထားလိုက်သည်။ အရေးပေါ်ကားတစ်စင်း အသံကုန်မြည်ဟီး၍ အိမ်နားမှ ဖြတ်သွားသံ၊ အချိန်အခါမရွေး နေပူမရှောင် မိုးရွာမရှောင် အော်မြည်တတ်သောကြောင့် တွန်သံချိုသည်ဟု မခံစားရတာ့သော ဥသြငှက်၏ အသံ၊ အိမ်နီးချင်းအခန်းမှ မွေးပေါက်စ ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်၏ ငိုသံ၊ လူသံသူသံများနှင့် ညစာ စားသောက်ပြီး ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ ဆေးကြောနေသော အသံ၊ အိမ်ပေါ်ထပ်မှ ကုလားထိုင်များကို ဒရွတ်တိုက် ဆွဲရွှေ့သောအသံ၊ ထိုအသံများအားလုံး တိတ်ဆိတ်သွားသည်အထိ နေရာမှာ ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေမိသည်။ ထိုင်နေသော နေရာနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တည့်တည့်တွင် အိမ်အဝင် တံခါးမဟု ဆိုရမည့် တံခါးတစ်ချပ်ရှိနေသည်။ ထိုတံခါးချပ်ကို အဓိပ္ဗါယ်မဲ့ ငေးကြည့်ဖြစ်သော အချိန်များနှင့် သာမန်နှင့် မတူ၊ တမူထူးခြားသော၊ ကွဲကွဲပြားပြား ခွဲခြားနိုင်သော တံခါးခေါက်သံတစ်ခုကို မျှော်လင့် တောင့်တနေမိသော အချိန်များ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ထိုတံခါးချပ်တွင် အပြင်သို့ တွေ့မြင်နိုင်သော ချောင်းကြည့်ပေါက် သေးသေးလေးတစ်ခု ပါရှိသည်။ တစ်အိမ်လုံးတွင် ကိုယ် တစ်ယောက်တည်းသာ ရှိနေခဲ့သော အချိန်များအတွက် ထိုချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေးသည် များစွာ အထောက်အကူပြုပြီး နှစ်သက် ဖွယ်ရာလည်း ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။
ထိုချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေး မရှိခင်က တံခါးချပ်သည် ခပ်ရိုးရိုးနှင့် ဘာမျှ မပြောပလောက်သော သာမန် သစ်သားတံခါး တံခါးဟောင်းဟောင်း တစ်ချပ်သာ။ ထိုတံခါးချပ်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က တဒေါက်ဒေါက်နှင့် ခပ်ပြင်းပြင်း ခေါက်လိုက်သောအခါတိုင်းတွင် တပွေ့တပိုက်သော ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့စိတ်တို့ဖြင့် တံခါးချပ်ဆီသို့ မဝံ့မရဲ ခြေလှမ်းများနှင့် တိုးကပ်သွားရတတ်စမြဲ။ အချို့သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းများ၊ စုံထောက်ဝတ္ထုများထဲတွင် ပါလေ့ရှိသော သေနတ် (သို့) ချွန်မြမြဒါးတစ်ချောင်းကို ကိုင်ဆောင်သူ လူဆိုးတစ်ယောက်တစ်လေများ အိမ်ပေါက်ဝတွင် ရောက်နေလေမည်လားဟု ပူပူပန်ပန်တွေးရင်း တံခါးခေါက်သံကြားတိုင်း အလိုလို မူပျက်ကာ ထိတ်လန့်နေတတ်စမြဲ။
ထိုသို့ ထိတ်လန့်ရင်းမှပင် တံခါးမ၏ အတွင်းဖက်တွင် တစ်ထပ် ရှိနေသေးသော ပျော့စိစိ၊ မခိုင်မခန့် အလူမီနီယံ အချောင်းလေးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော တံခါးကြားမှ လက်လျှိုရင်း သစ်သားတံခါးကို အပြင်ကို မြင်နိုင်ရုံမျှ အသာဟကာ တစ်ဖက်မှ တံခါးခေါက်သူကို ကြည့်ရစမြဲ။ အများအားဖြင့်တော့ ကျောင်းရန်ပုံငွေအတွက် ရေခဲမုန့်လာရောင်းသော ကျောင်းသားကလေးများ၊ သတင်းစာအဟောင်းများ အလှူခံတတ်သော ကျောင်းသားကလေးများနှင့် တစ်ခါတရံတွင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လက်ကမ်းကြော်ငြာများ၊ ပိုစ့်ကဒ်များကို ဖြန့်ဝေရင်း သူတို့ဘာသာအကြောင်း ဟောလို ပြောလိုသော အမျိုးသမီးများသာ။ ထိုအခါ အသက်ကို မြန်မြန်ပြန်ရှူရင်းက အားနာနာဖြင့် ဆောရီး ဟု ငြင်းကာ တံခါးချပ်ကို အဆောတလျင် ပြန်ပိတ်လိုက်ရစမြဲ။ ရံဖန်ရံခါလာတတ်သော ဒိန်ချဉ်ဘူးများ လိုက်ရောင်းသည့် အန်တီကြီးကိုတော့ တကျွီကျွီမြည်နေတတ်သော သူ့တွန်းလှည်းအသံကြားထဲက သိနေသောကြောင့် သူ ဘယ်လိုပင် တံခါးကို ခေါက်သော်ငြား ထမဖွင့်ဖြစ်တော့ချေ။
တစ်ခါတရံတွင်မူ လည်ပင်းတွင်ချိတ်ဆွဲထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှ ကဒ်ပြားကို ပြကာ ပြူတင်းပေါက်များ စစ်ဆေးရန်၊ သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် ခြင်ပေါက်ဖွားမှုကို စစ်ဆေးရန် အစရှိသော အကြောင်းပြချက်များဖြင့် တံခါးခေါက်လာသုများကိုလည်း တွေ့ရတတ်၏။ အိမ်ရှင်မရှိသေးပါ ဟူသော အကြောင်းပြချက်ကို (ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ) ဇွတ်အတင်း ပြကာ တံခါးကို ပြန်ပိတ်လိုက်မိစမြဲ။ ထိူသူတို့သည်လည်း အိမ်အကူတစ်ယောက်နှင့် ဆင်ဆင်တူသော နွမ်းဖတ်ဖတ် ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင် ကိုယ့်ကို ကြည့်ကာ အေးအေးချမ်းချမ်း ယုံယုံကြည်ကြည် လှည့်ပြန်သွားကြစမြဲ။ ထိုအခါမှ ရယ်ချင်စိတ်တဝက်ဖြင့် တံခါးကို ပြန်ပိတ်ရင်း အသက်ကို ရဲရဲရှူခွင့် ရလေ၏။ အပြင်ကော်ရစ်ဒါနေရာကို တစ်လတစ်ကြိမ် ရေလာဆေးသော အလုပ်သမားကလေး ဆိုလျှင်တော့ သိသာသည်။ ရေသံ တရှဲရှဲကြားမှ တံခါးကို တစ်ချက်ချင်း ဖြေးဖြေးနှင့် လေးလေး ခေါက်မည်။ သို့ဆိုလျှင် တံခါးကို သွက်သွက်လက်လက် ပြေးဖွင့်ကာ အပြင်ဖက်တွင်ရှိနေသော မိမိပိုင် ဖိနပ်ကလေး နှစ်ရံ သုံးရံကို ရေမစိုခင် အိမ်ထဲသို့ အမြန်သွင်းရတတ်သည်။ ရေများ စိုနစ်နေဖူးသော ဖိနပ်များသည် ရေခြောက်သွားသော်လည်း မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ အကောင်းအတိုင်း ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ချေ။
ကုသို်လ်ကံကောင်းလာသည်ဟု ဆိုရမည်လား… ဆိုးလာသည်ဟု ဆိုရမည်လား။ တံခါးမကြီး သော့ ပျက်သွားသော တစ်ရက်တွင် ထိုတံခါးချပ်ကို အသစ်တစ်ခုနှင့် အစားထိုး လဲလှယ်စရာ အကြောင်းဖန်လာခဲ့သည်။ အသစ်ရောက်လာသော တံခါးချပ်၏ အသစ်နံ့ (သို့) စိမ်းရွှေရွှေဆေးနံ့ကို မူးဝေ ခေါင်းကိုက်မိသော်လည်း တံခါးချပ်တွင် တပါတည်း ပါလာခဲ့သော စိတ်ဝင်စားစရာ၊ ချစ်စရာ ချောင်းကြည့်ပေါက်သေးသေးလေးက ထိုတံခါးချပ်အသစ်နှင့် အချိန်တိုတိုအတွင်း ယဉ်ပါး ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်စေခဲ့သည်။ အနှီ ချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေးသည် အရွယ်အစားအားဖြင့် လက်သန်း လက်သည်းခွံလောက်သာ ရှိသည်။ ထိုမျှပင် သေးငယ်သော်လည်း သူ့အနားကို တိုးကပ်ကာ ကြည့်လိုက်သော် အပြင်ဖက်ကို မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်ဖြင့် ကြည်ကြည်လင်လင် မြင်ရစေသည်။ သူ့အစွမ်းကား မသေးလှချေ။ ထိုချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေးနှင့် မိတ်ဆွေဖြစ်ခါစ အချိန်များကို ယခုထိ သတိရနေသေးသည်။
ထိုရက်များအတွင်း အပြင်ဖက်မှ ဘာသံကြားကြား ချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေး အားကိုးဖြင့် လှုပ်ကနဲ ထကာ ကြည့်မိသည်ချည်းသာ။ တံခါးချပ်၏ အတွင်းဖက်မှ ကြည့်နေသည်ကို အပြင်ဖက်မှ သူတို့ မသိနိုင် ဟူသော အကြောင်းအရာသည် စိတ်ကို လုံခြုံစေသလို များစွာသော ကျေနပ်မှုကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်လေသည်။ ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ် ညနေခင်းများတွင် အပြင်ဖက်ဆီမှ အသံ တစ်စွန်းတစ်စ ကြားရသည့်အခါတိုင်း ထိုချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေး အားကိုးဖြင့် အငြိမ်မနေနိုင်ပဲ ထ ထ ကြည့်မိစပြံ။ အများအားဖြင့်တော့ စောစောက ပြောခဲ့သလိုပင် ရေခဲမုန့်လာရောင်းသော ကလေးငယ်များ၊ ဆင်တူ ကျောင်းဝတ်စုံကိုယ်စီဖြင့် သတင်းစာလာသိမ်းသော ကလေးများ၊ သံပုံး ပလတ်စတစ် နှင့် ဟိုပုလင်း ဒီပုလင်းများ လိုက်ဝယ်တတ်သူများ၊ ညနေ ခြောက်နာရီစွန်းစွန်းတွင် ရုံးအပြန် တံခါး အဖွင့် အပိတ် ပြုရင်း စကားကျယ်ကျယ် ပြောနေတတ်သော အိမ်ရှေ့တည့်တည့်အခန်းမှ ညီအမနှစ်ယောက်၊ တစ်ခါတရံ ရုံးပိတ်ရက်များတွင် ဆူညံသံများစွာပြုရင်း သူတို့အခန်းသို့ အလည်လာတတ်သော သူတို့၏ ဆွေမျိုး မိတ်သဂ္ဂဟများ၊ ဘေးချင်းကပ်လျက် အခန်းသို့ သောကြာနေ့ညတိုင်း ရောက်လာတတ်သော ခရစ်ယာန်သီချင်း တီးမှုတ်သီဆိုတတ်သော အဖွဲ့… စသည် စသည်တို့ကိုသာ တွေ့ရတတ်သည်။ တွေ့ရသမျှကို စိတ်ဝင်စားစဖွယ် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပမာ မညောင်းမညာ မပျင်းမရိ ရပ်ကြည့်နေခဲ့မိသည်။
ထိုအခါ တစ်ကြိမ်နှင့် တစ်ကြိမ် မတူညီသော ကျောင်းဝတ်စုံများနှင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူကလေးများ၏ နုနယ်ပျိုမြစ်သော အပျော်စွက်သည့် မျက်နှာလေးများကို မြင်တွေ့ဖူးခဲ့ပြီ။ အဖြူရောင် ဂျာစီအင်္ကျီနှင့် အရောင်မွဲခြောက်ခြောက် ဘောင်းဘီတိုကို ဝတ်ဆင်ထားသော သံပုံး ပုလင်း ဝယ်သော အန်ကယ်ကိုလည်း မှတ်မှတ်သိသိ တွေ့ဖူးခဲ့ပြီ။ အိမ်ရှေ့ခန်းမှ ညီအစ်မနှစ်ယောက်၏ ရုံးတက် ဂါဝန်လှလှလေးများကိုလည်း တွေ့ဖူးခဲ့သည့်အပြင် စိတ်ကူးထဲမှာတောင် ထိုဂါဝန်မျိုး ဝယ်ယူ ဝတ်ဆင်ကြည့်ခဲ့ဖူးလေပြီ။ ထိုမျှသာမက ဒိန်ချဉ်ရောင်းတတ်သော အန်တီကြီးကိုလည်း ချောင်းကြည့်ပေါက်မှ အေးအေးသက်သာ စောင့်ကြည့်ဖူးခဲ့ပြီ။ ရယ်ချင်စရာ တစ်ခုမှာ ထိုအန်တီကြီးသည် သူသယ်ယူလာသော တွန်းလှည်းလေးတွင် ခေါက်ကုလားထိုင် အသေးစားလေး တစ်လုံး ချိတ်တွယ်ထားပြီး အိမ်ရှေ့တွင် ထိုခေါက်ကုလားထိုင်ကို ချခင်းကာ အကျအန ထိုင်ရင်း အမောအပန်း ဖြေနေတတ်ခြင်းပင်။ တစ်ရက်တွင်မူ ထိုသို့ ထိုင်နေရင်း သူ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှ ဒိန်ချဉ် ရောင်းရငွေများ ဖြစ်ဟန်တူသော ငွေစက္ကူရွက်အချို့နှင့် အကြွေစေ့များကို ထုတ်ယူ ရေတွက်နေပုံကိုပါ တွေ့လိုက်ရသောအခါ တံခါးအတွင်းဖက်မှနေ၍ တစ်ကိုယ်တည်း တိတ်တဆိတ် သဘောတကျ ရယ်မောလိုက်မိသေးသည်။
သည်လိုနှင့် ရက်ပေါင်းအတော်ကြာသောအခါ ထိုချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေးနှင့် အလွန်တရာ ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်နေပေပြီ။ ယခင်က မဝံ့မရဲ တိုးကပ်သွားရတတ်သော ထိုတံခါးချပ်ဆီသို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တိုးကပ်သွားတတ်အောင် ထိုချောင်းကြည့်ပေါက်ငယ်ကလေးက အကူအညီများစွာ ပေးခဲ့လေသည်။ ယခုဆိုလျှင် အပြင်မှ အသံသဲ့သဲ့ကြားရုံမျှဖြင့် ဘယ်သူ ဘယ်ဝါမှန်း အတတ်ပြောနိုင်နေပြီ။ တစုံတစ်ယောက်က တံခါးကို လာခေါက်သောအခါ (သို့) မကြားဖူးသော အသံစိမ်းများကို ကြားရလျှင်တောင်မှ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေစရာ မလိုတော့ပဲ ချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေးမှ တဆင့် သက်တောင့်သက်သာ ကြည့်ရင်း တံခါး ဖွင့်စရာ လို မလို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပေပြီ။ မျှော်လင့်နေသော တံခါးခေါက်သံတစ်ခု ရောက်မလာသေးသော်လည်း တစ်ယောက်တည်းနေ့ရက်များနှင့် ငြီးငွေ့စရာ နေ့စွဲများအတွက် ထိုချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေးက တနည်းတဖုံလည်း အပျင်းပြေစေခဲ့သေးသည် မဟုတ်လား။
တညနေ… ထိုညနေက မိုးစက်တို့ တဖွဲဖွဲကျနေခဲ့သည်။ လိုအပ်နေသော တံခါးခေါက်သံတစ်ခုကို မျှော်နေရင်းမှပင် အရင်နေ့များက စားမကုန်ပဲ ကျန်ရှိနေသော အေးစက်စက် ဖြူစုတ်စုတ် ကြာဆံပြုတ် တစ်ပန်းကန်ကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ထဲ ထည့်နွှေးကာ ခပ်သွက်သွက်စားသောက်ပြီး အိပ်ရာဝင်ခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပင် မျက်လုံးများ မှေးစင်းကာ အိပ်ပျော်သွားသည် ဟု ထင်လိုက်သည်။
သတိရမိသောအချိန်တွင် ကိုယ်တိုင်က ချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေးပါဝင်သော တံခါးချပ်ကို ခပ်သေးသေးဖြစ်အောင် အပိုင်းပိုင်း ခေါက်ချိုးကာ လွယ်နေကျ စလွယ်သိုင်းအိတ်ထဲ ထည့်ရင်း သွားလိုရာအရပ်ဆီသို့ တက်ကြွ လွတ်လပ်စွာ ဦးတည်လျက်။ ကိုယ် ကြည့်လို မြင်လိုသော နေရာနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် အသာ ရပ်တန့်၊ အိတ်ထဲမှ တံခါးချပ်ကို ထုတ်ကာ ဖြန့်လိုက်ပြီး ထိုချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေးမှတဆင့် ကြည့်လိုရာကို အလျင်စလို လှမ်းကြည့်လိုက်မိ၏။ ထိုအချိန်တွင် လေပြင်းပြင်းတို့က အနားတွင် ဝေ့ကာဝဲကာ တိုက်ခတ်လျက် သာယာကြည်နူးဖွယ်ရာ။ သေးငယ်သော ချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေး၏ အစွမ်းကြောင့် တဖက်မှ မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်ထဲတွင် ကို်ယ် တွေ့လိုသော သူ့ကို ကြည်လင် ပြတ်သားစွာ မြင်တွေ့ရချေ၏။
လှပနွေးထွေးသော နံနက်ခင်း နေရောင်အောက်တွင် အပူအပင် အကြောင့်ကြ ကင်းစင်စွာ၊ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်စွာ ပျော်ရွှင်ရယ်မောနေသော သူ့ကို တွေ့ရ၏။ မနက်စောစောတွင် ကွေ့ကောက်သော်လည်း ချစ်စဖွယ် လမ်းကလေးအတိုင်း အသက်ဝဝရှူရင်း လက်ကို လွှဲကာ လမ်းလျှောက်နေသော သူ့ကို တွေ့ရ၏။ ရံဖန်ရံခါတွင်မူ အပေါင်းအသင်းများနှင့် စကားတွေ ဖေါင်ဖွဲ့ရင်း၊ လက်ထဲတွင်ကိုင်ထားသော စာအုပ်ကလေးများကို တဖျတ်ဖျတ်လှန်ကြည့်ရင်း ပြုံးနေတတ်သော သူ့ကို တွေ့ရ၏။ မိုးရွာပြီးကာစ စိမ်းလန်းနေသော တောအုပ်ကလေးအနားတွင် စာတစ်အုပ်ဖြင့် သက်တောင့်သက်သာ အနားယူနေသော သူ့ကို တွေ့ရ၏။ အရှိန်နှေးနှေးဖြင့် လှပစွာစီးဆင်းနေသော မြစ်တစ်စင်းဆီသို့ မျက်နှာမူရင်း ဝိုင်နီ တစ်ခွက်နှင့်အတူ တစ်စုံတစ်ခုကို တီးတိုး ရေရွတ်နေသော သူ့ကို တွေ့ရ၏။ ပြာလဲ့လဲ့ကောင်းကင်ပေါ်မှ အဖြူရောင် တိမ်စုများဆီသို့ မော့ကြည့်ရင်း စီးကရက် မီးခိုးငွေ့များအကြား တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို စိတ်လိုလက်ရ သီဖွဲ့နေသော သူ့ကို တွေ့ရ၏။ ညနေခင်း နေညိုချိန်များတွင် အဝေးတစ်နေရာကို ရီဝေစွာ ငေးမောနေတတ်သော သူ့ကို တွေ့ရတတ်ပြန်၏။ သူ့အခန်း ဝရန်တာလေးမှ ပန်းအိုးလေးများ၊ သစ်ပင်စိမ်းစိမ်းလေးများကို ရေလောင်းနေသော သူ့ကို တွေ့ရတတ်ပြန်၏။ ဤသို့ဖြင့် ကိုယ်တွေ့လိုသော သူ့ကို အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနေသော အနေအထား အမျိုးမျိုးဖြင့် တွေ့ခွင့်ရခဲ့၏။ ထိုသို့တွေ့ရရုံမျှဖြင့် များစွာ ကျေနပ်ရပြန်၏။ နှစ်လိုစိတ်ဖြင့် ပြုံးရယ်ရပြန်၏။ ချစ်ခင်စိတ်ဖြင့် ကြည်နူးရပြန်၏။ ထို့အတူ နာကျင်သော လွမ်းဆွတ်မှုများကို (မလိုလားသော်လည်း) ကြည်ဖြူစွာ လက်ခံရပြန်၏။
စိတ်ကူးအတွေးဖြင့် သူ့အနားသို့ ညင်ညင်သာသာ တိုးကပ်သွားမိသေးသည်။ သို့ဆိုလျှင် ထင်မှတ်မထားသောကြောင့် သူ ရုတ်တရက် အံ့သြသွားလေမည်လား၊ ချစ်ခင်စုံမက်သော စိတ်အစဉ်ဖြင့် အနားသို့ ဆွဲယူ ပွေ့ဖက် ခေါ်ငင်လေမည်လား၊ ပြီးလျှင်တော့ အခါများစွာမှာ ပြောပြနေကျ ဒဏ္ဍာရီဆန်သော ပုံပြင်ဟောင်းများကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြောပြလိမ့်မည်လား၊ မျက်နှာပေါ်သို့ ဖုံးကွယ်လုနီးပါး ရှည်လျားနေသော ဆံနွယ်များကို ညင်သာစွာ သပ်တင်ပေးရင်း ဆိုပြနေကျအတိုင်း လေပြည်အလာ ကေသာလွန့်လူးလွင့်နေ… ဟူသော သီချင်းစာသား တစ်ပိုင်းတစကို တီးတိုး ညည်းလေမည်လား၊ ကိုယ် စွဲလန်းနှစ်သက်မိသော Espresso တစ်ခွက်ကို နှင်းဆီနီ တစ်ပွင့်နှင့်အတူ ကမ်းလိုက်မည်လား၊ သို့တည်းမဟုတ် တခုခုကို အလိုမကျစိတ်များဖြင့် မြည်တွန် တောက်တီးကာ သွား… အနား မလာခဲ့နဲ့… ဟု မာမာထန်ထန် ပြောလိုက်လေမည်လား။ ဝေခွဲမရခဲ့ပါ။
ကျေနပ် ကြည်နူး နာကျင် လွမ်းဆွတ် အစရှိသော ခံစားမှု မျိုးစုံတို့ဖြင့် အိပ်မက်မှ ရုတ်တရက် လန့်နိုးလာခဲ့၏။ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ရိုးစင်းသော အိပ်မက်တစ်ခုအတွက် အိပ်ရာဘေးမှာ ကျနေသော စလွယ်သိုင်းအိတ်ကလေးထဲ လက်နှိုက်ကာ ခေါက်ချိုးထားသော တံခါးချပ်ကလေး တကယ် ရှိ မရှိ ရှာဖွေကြည့်နေမိသေးသည်။ အိပ်မက်ဟု သေချာသွားသောအခါတွင်မှ အိမ်ရှေ့သို့ ထွက်ကာ ချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေးပါသော တံခါးတစ်ချပ်ကို မမြင်ဖူးသူတစ်ယောက်ပမာ အထပ်ထပ် ကြည့်မိပြန်၏။ ထိုချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေးကို လက်ဖြင့် တယုတယ ကိုင်တွယ်ကြည့်မိပြန်၏။ ထို့နောက် မျှော်နေကျအတိုင်း တစ်စုံတစ်ယောက်၏ တံခါးခေါက်သံကို မျှော်မိပြန်၏။
(၁၆ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၄)
- ၂၀၁၄ စက်တင်ဘာလ - နှင်းဆီဖြူမဂ္ဂဇင်း တွင် ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်သည်။
Posted by သက်ဝေ at 9:05 PM 12 comments:
Posted by သက်ဝေ at 9:30 PM 12 comments: